मध्य भोटेकोशीको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ? « Nepal Bahas
मध्य भोटेकोशीको आईपीओमा कति पर्यो आवेदन ?
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार ११:३९
२२ असोज, काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले असोज २० गते बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीको निष्कासन गरेका आईपीओमा पहिलो दिन उच्च आवेदन परेको हो ।
निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार करिब ५ लाख ९० हजार जना आवेदकहरूले ९१ लाख ९१ हजार ९ सय ७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रूपैयाँ अंकित दरमा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ९० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये, ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५० हजार कित्ता सामुहीक लगानी कोष र ४ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ८१ लाख ९० हजार कित्ताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सर्वसाधारण लगानीकताले कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ताको लागि असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यस अवधिमा सबै बिक्री नभएमा ढिलोमा कात्तिक ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
त्यसैगरी, कम्पनीको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा मेरो सेयरमार्फत आईपीओ भर्न सक्नेछन् ।